२०१ 10 को शीर्ष १० मोबाइलहरू Androidsis
हामी पहिले नै डिसेम्बर मा छौं, एक समय जब हामी बाँचेको वर्षलाई फर्केर हेर्नु पर्छ। एक अवसर जुन प्राय: प्रयोग गरिन्थ्यो बर्षको सर्वश्रेष्ठ संग सूची बनाउनुहोस्। यो आज हामी के गर्न जाँदैछौं, ए यस वर्ष बजारमा पुगेका १० सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड फोनहरूको साथ चयन। थप रूपमा, यस चयनले तपाईंलाई तपाईंको क्रिसमस उपहारहरूको लागि केहि विचारहरू दिन सक्छ।
२०१ 2017 मा एक बर्ष भयो जुन हामीलाई मार्केटमा धेरै धेरै रोचक मोबाईलहरूसँग छोडियो। यसैले केवल १० फोनहरू छनौट गर्न अलि गाह्रो छ। तर हामीले १० मोबाइलमा सूची कम गर्नमा सफल भएका छौं जुन निस्सन्देह नायक हुन योग्य छ। कुन फोनले सूची बनायो?
कारण यी उपकरणहरू सूचीमा छन् धेरै। त्यहाँ केहि जो बाँकी भन्दा माथि उभिएका छन्। जे होस् विचार केवल उच्च-अन्तमा मात्र केन्द्रित छैन, तर उपकरणहरूको एक राम्रो चयन संग छोड्नुहोस् जुन धेरै सार्थक हो। तपाईलाई लाग्छ कुन फोन यस शीर्ष १० मा हुनेछ? हामी ती सबैलाई तल छोड्दछौं। यद्यपि यो भन्नु महत्वपूर्ण छ तिनीहरूलाई कुनै विशेष क्रममा व्यवस्थित गरिएको छैन.
2 हुआवे मेट ate० / मेट Pro० प्रो
4 Xiaomi एमआई 6
5 सोनी एक्सपीरिया XZ प्रीमियम
7 Xiaomi MyXXUMX
10 मोटो Z2 प्ले
हामी एउटाको साथ सूची सुरु गर्दछौं कोरियाली बहुराष्ट्रिय झण्डा। सामसुले यस वर्ष धेरै शीर्ष उपकरणहरू सुरू गर्यो। यद्यपि यो ग्यालेक्सी नोट been भएको छ जुन सम्भवत सबैभन्दा बढी देखिएको छ। एक उपकरण जुन धेरै कारणहरूले गर्दा बाहिर आयो। उसको अनन्त प्रदर्शन डिजाइन, बर्ष को एक प्रवृत्ति, धेरै प्रभावी छ। थप रूपमा, यो ब्राण्डको पहिलो उच्च-अन्त भएको छ डबल क्यामेरा छ.
कुनै श doubt्का बिना, एक शक्तिशाली उपकरणले राम्रोसँग काम गर्दछ र हामी उच्च-गुणवत्ता छविहरू सक्षम गर्दछ। उपकरण हालaमा उपलब्ध छ 779 .XNUMXeयुरो.
हुआवे मेट ate० / मेट Pro० प्रो
हुवावे पहिले नै विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण ब्रान्डमध्ये एक भएको छ। तिनीहरू पनि मार्केटमा शुरू गरिएको सबैभन्दा उपकरणहरू मध्ये एक हो। निस्सन्देह सबैभन्दा उल्लेखनीय मध्ये एक यो हो मेट 10० र मेट Pro० प्रो। हुवावे मेट १० छ १.5,9..XNUMX इन्च स्क्रीन र उसको जेठो भाई6इन्च। र्यामको रूपमा, पहिलोसँग GB जीबी र अन्य GB जीबीको छ। दुबैसँग GB4जीबी भण्डारण र ए 4.000००० mAh ब्याट्री। हुवावेको उच्च-अन्त दायरालाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई गुण उपकरणहरू।
Huawei Mate 10aमा उपलब्ध छ 677 .XNUMXeयुरो। जबकि मेट १० प्रो को लागी उपलब्ध छ 730 यूरो.
हुवावे मेट १० यहाँ खरीद गर्नुहोस्
हुवावे मेट १० प्रो यहाँ खरीद गर्नुहोस्
यो सूचीमा सम्भवतः मोडेल हो जसले धेरैलाई चकित पार्छ, तर यो भन्नु पर्दछ कि स्पेनिश ब्रान्डले हामीलाई धेरै चाखलाग्दो मोबाइलहरू साथ छोड्दैछ। यो सम्भवत सबै भन्दा राम्रो हो। यो यसको प्रमुख बन्यो। छ १.5,2..XNUMX इन्च स्क्रीन। एक प्रोसेसर हाम्रो भित्र पर्खिरहेको छ Snapdragon 626 र एक Adreno 506०12 GPU। हामीले यसको १२ MP रियर क्यामेरा हाइलाइट गर्नुपर्नेछ, रातको फोटो लिनको लागि आदर्श।
यो उपकरण हाल छ अमेजनमा २ 299eयूरोको मूल्यमा उपलब्ध छ। यद्यपि यो एक अस्थायी पदोन्नति हो, त्यसैले यदि तपाईं यस मोडेलमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हतार गर्नुहोस्।
चिनियाँ ब्रान्ड बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यस वर्ष उनीहरूले हामीलाई धेरै उपकरणहरू छोडे। सब भन्दा प्रख्यात यो हो Xiaomi एमआई 6। को स्वामित्व १.5,15..XNUMX इन्च स्क्रीन। भित्र यसको एक प्रोसेसर छ Snapdragon 835 (२०१ of को सर्वश्रेष्ठ)। यसका अतिरिक्त GB जीबी र्याम र १२2017 जीबीको भण्डारण हुन्छ। थप रूपमा, यो एक छ १२ + १२ MP डुअल रियर क्यामेरा। एक शक्तिशाली फोन बजार मा सब भन्दा स्थापित ब्रान्डको साथ प्रतिस्पर्धा गर्न डिजाइन।
उपकरण हालaमा उपलब्ध छ 434,39 .XNUMXeयुरो.
स्मार्टफोनको बजारमा सोनीको लोकप्रियतामा खासै गिरावट आएको छ, यद्यपि उनीहरूले हामीलाई एक्सप्रेसिया एक्सजेड प्रीमियम जस्ता धेरै चाखलाग्दो फोनहरू साथ छोडे। एक उपकरण जससँग १.5,5..XNUMX इन्च स्क्रीन। म तपाईंलाई शर्त दिन्छु प्रोसेसरको रूपमा स्नैपड्रैगन 835। र यससँग GB जीबीको र्याम र GB4जीबी आन्तरिक भण्डारण छ। जे होस् यसको क्यामेरा हाइलाइट हुनुपर्दछ, यसको गुणस्तर र को लागी मोशन आई जस्तो अतिरिक्त कार्यहरू वा भविष्यवाणी क्याप्चर।
डब सोनीको सर्वश्रेष्ठ फोन भेटियो 669,31 यूरो बाट उपलब्ध छ.
अर्को ब्रान्ड जुन बजारमा आफ्नो समयबाट गुज्र्दैन, यो एलजी हो, यद्यपि कोरियाली बहुराष्ट्रियले हामीलाई सबैभन्दा रोचक उपकरणहरू छोड्दछन्। उनीहरूले यस वर्ष दुई उच्च-एन्ड मोबाइलहरू सुरू गरे LG G6 र LG V30। दुबै सूचीमा हुन योग्यका छन्, यद्यपि हामीले दोस्रो चयन गरेका छौं। यो यसको लागि बाहिर खडा छ १.6..XNUMX इन्च स्क्रीन। एक प्रोसेसर मा शर्त Snapdragon 835 भित्र, RAM जीबी र्याम र or4वा १२64 जीबी भण्डारणको साथ। थप रूपमा, यो एक छ १ + + १ MP MP डुअल रियर क्यामेरा.
LG V30 हालaमा उपलब्ध छ 947,92 .XNUMXeयुरो.
यो उपकरण एक धेरै साधारण कारणका लागि बर्षको एक मुख्य आकर्षण हो। उही हो र शाओमीको पहिलो फोन एन्ड्रोइड वन मा शर्त लगाईन्छ (शुद्ध Android)। त्यसैले यो एक धेरै विशेष उपकरण हो। यो एक .5,5.-इन्च स्क्रीन छ। भित्र एक छ स्न्यापड्रैगन 625। प्रोसेसर। GB जीबी र्याम बाहेक र GB4जीबीको आन्तरिक भण्डारण। यो पनि एक छ रियरमा १२ + १२ MP डुअल क्यामेरा.
सियाओमी उपकरणaमा उपलब्ध छ 282 .XNUMXeयुरो.
अर्को कम्पनी जसले यस वर्ष कठिन समयको अनुभव गरेको छ, जबकि परिस्थिति सुधार भएको देखिन्छ। यो ताइवानको कम्पनीले अहिले सम्म जारी गरेको उत्तम उपकरण हो। छ १.5,5..XNUMX इन्च स्क्रीन र यो भित्र छ प्रोसेसरको रूपमा स्नैपड्रैगन 835।। यसमा GB जीबीको र्याम र GB4जीबी भण्डारण छ। जे होस्, के वास्तवमा बाहिर खडा यो हो क्यामेरा, बजार मा सबै भन्दा राम्रो एक मानिन्छ। पछाडि एकल १२ MP क्यामेरा, तर त्यो डुअल क्यामेरा मोबाईलको स्तरमा छ।
HTC U11 एक मा उपलब्ध छ 600 .XNUMXeयुरो.
मार्केटमा हिट गर्न अन्तिम फोन मध्ये एक। यो उच्च-अन्तको नवीकरण संस्करण हो केहि महिना अगाडि जारी गरियो। मुख्य परिवर्तन डिजाईनमा छ, किनकि यसले अब शर्त गर्दै छ अनन्त स्क्रीन, त्यो फ्रेम बिना नै हो। २०१ 2017 को स्टार स्क्रिन अनुपात हुनुको साथै, अनुपात १::।। बाँकी विनिर्देशहरू, जुन तपाईं यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छतिनीहरू सायद परिवर्तन भएको छ।
उपकरणको आधारभूत संस्करण (GB जीबी रैम + GB4जीबी रोम) हालमा उपलब्ध छa599 .XNUMXeयुरो.
मोटोरोला एक ब्रान्ड हो कि बजारमा फिर्ता आउन र यसको ठाउँ पत्ता लगाउन सफल भयो। उनीहरूले मध्य दायरामा ध्यान दिन धेरै राम्रो परिणामको साथ छनौट गरेका छन्। तिनीहरूको सब भन्दा राम्रो फोनहरू यो हो मोटो जेड २ प्ले, प्रीमियम मध्य-दायरासँग सम्बन्धित छ। छ १.5,5..XNUMX इन्च स्क्रीन र यसको भित्र प्रोसेसरको रूपमा स्नैपड्रैगन 626२4 छ। योसँग GB जीबी र्याम र GB 64 जीबी भण्डारण छ। एक हुनुको साथै १ MP MP रियर क्यामेरा। सामान्य रूपमा, एक धेरै पूर्ण उपकरण जसले राम्रो अपरेसनको ग्यारेन्टी गर्दछ।
उपकरण हालaमा उपलब्ध छ 343,99 .XNUMXeयुरो.
यो छ हाम्रो २०१ Top को शीर्ष १० फोनहरू। यो विचारको सबै थोक हुनुपर्दछ, यद्यपि अपेक्षित रूपमा, धेरै जसो उपकरणहरू उच्च-अन्तमा छन्। त्यहाँ अन्य धेरै फोनहरू छन् जुन पात्र हुन लायक छन्, तर केवल १० चयन गर्नका लागि थियो। हामी आशा गर्दछौं कि यो सूची तपाईंको लागि रोचक भएको छ र विचारहरू दिनुहोस् जब यो तपाईंको मोबाइल नवीकरणको कुरा आउँछ। तपाइँ यस शीर्ष १० मोबाइल फोनहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » २०१ of को शीर्ष १० फोनहरू
लीक छविहरू र Huawei P11 का विवरण